“कुन दैवले गरिब बनायो होला ! मर्ने बेला पनि छोराछोरीसँग छुट्टिनुपर्ने ?” – HamroSamrachana
“कुन दैवले गरिब बनायो होला ! मर्ने बेला पनि छोराछोरीसँग छुट्टिनुपर्ने ?”
हाम्रो संरचना । १३ चैत्र २०७३, आईतवार १०:४६
चैनपुर (बझाङ) / “आधा जीवन अर्काको देशमा बिताएँ । अब त घरमै बसेर पनि गुजारा चलाउन सकिन्छ जस्तो लागेको थियो,” १८ फागुनमा छोरासहित सात वर्षपछि भारत हिँडेका ६२ वर्षीय पृथ्वीले लाचारी व्यक्त गरे, “जंगलमा जडीबुटी नै पाउन छोड्यो । परिवार पाल्न केही त गर्नुपर्‍यो भनेर भारत जान लागेको ।”
कैलाश गाविसका पृथ्वी सिंह १० वर्षको उमेरदेखि मजदुरीका लागि भारत जान थालेका हुन् । जीवनका झन्डै ४३ वर्ष ६ महिना भारतको मजदुरी र ६ महिना घरको काम गर्दै बिताएका उनले ०६७ देखि भने भारत जानुपरेको थिएन । कारण थियो, जडीबुटी टिपेर हुने आम्दानी ।
जनताको तिव्र सर्वाङ्गीण विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन मुख्यमन्त्रीको आग्रह